Global Voices teny Malagasy · 21 Desambra 2018
21 Desambra 2018
Tantara tamin'ny 21 Desambra 2018
Ny Herinandron-tahotr'i Myanmar
Azia Atsinanana21 Desambra 2018
Te hampatsiahy ny olona i Moe Moe fa herinandro lehibe eo amin'ny tantaran'i Myanmar ity herinandro ity.
Nepal: Mamindra am-pitandremana noho ny Antony Demokratika
Azia Atsimo21 Desambra 2018
Taorian'ny fihetsiketsehana saika naharitra teo amin'ny telo herinandro teo, nanaiky ny hamerina ny parlemanta ny Mpanjaka Gyanendra ao Nepal. Nanafoana ny antenimieram-pirenena ny Mpanjaka tamin'ny 2002 satria toa tsy nahomby ny resaka ho amin'ny fandriampahalemana nataon'ny governemantan'ilay Praiminisitra Sher Bahadur Deuba tamin'izany miaraka amin'ireo Maoista.
Japana: Grumpy Jiisan ao amin'ny Nico Nico Douga
Amerika Avaratra21 Desambra 2018
"Grumpy Jiisan", rangahy iray mpisotro ronono avy any Arizona maneho ny heviny momba ny anime Japoney no malaza ao amin'ny Nico Nico Douga, sampana iray fizarana lahatsary malaza be ao Japana, tato ho ato. Tena malaza be ao ireo lahatsarin'i Grumpy Jiisan hany ka nahangona fanehoankevitra an'arivony.
Eoropa Afovoany & Atsinanana21 Desambra 2018
Amerika Latina21 Desambra 2018
Efa eo ambaravaran'ny fankatoavana ny isiany ao amin'ny rakibolan'ny emoji ity zava-pisotro amerikana tatsimo ankafizin'olona an-tapitrisany ity.
Manoloana ny doro-tanety sy ny oram-baratra, ‘’Inona ny fiovaovan’ny toetrandro ?’’ hoy ny fanontanian’ireo Aostraliana.
Oseania21 Desambra 2018
"Nandritra ny famaizan’i Queensland sy ny haintany tany amin'ny morontsiraka antsinanana ary ny safo-drano tany Sydney dia tsy sahy niatrika ny zava-misy ny ankamaroan’ny ‘politisiana."